कोरोना कहर केलाउँदा : यसकारण उत्कृष्ट छ पूर्वीय दर्शन र जीवन पद्धति | Ratopati
कोरोना कहर केलाउँदा : यसकारण उत्कृष्ट छ पूर्वीय दर्शन र जीवन पद्धति
personपं. दीनबन्धु पोखरेल exploreकाठमाडौं access_timeचैत १९, २०७६ chat_bubble_outline0
भाइरस एक सुषुप्त अवस्थामा रहने विषाणु हो, यसले जीवित कोशिकामा वंशवृद्धि गर्दछ, अति सुक्ष्म अवस्थामा जीवित प्राणीमा प्रवेश गरी कोशिकालाई असर पु-याउँदछ अनि अस्वस्थ बनाउने कार्य गर्दछ भन्ने कुरा अहिलेको विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ । भाइरस पनि भिन्न भिन्न प्रकृतिका हुन्छन् त्यसैले भाइरसले जीवित प्राणीमा सकारात्मक या नकारात्मक दुवै असर गर्दछ भन्ने आधुनिक विज्ञानको मत छ ।
परप्राणीलाई अमानवीय तबरले बध गरी त्यसको भोजनमा रमाउनुको परिणति आज मानवले भोग्दैछ, स्वभावैले या प्रकृतिजन्य हिसाबले भन्नु पर्दा मानिस मांशहारी प्राणी होइन । किनभने:
हाम्रो शास्त्रीय मत छ:
यस सम्बन्धमा गीताले स्पष्ट भनेको छ:
धर्म सिद्धान्तले प्राणीमाथि दया गर भन्दछ, भौतिक विज्ञानले त्यसलाई इकोसिस्टम भन्दछ, यी दुवैको तादाम्यता कहीँ न कहीँ रहेको छ, जसको मान्यता भूमण्डलमा रहेका समस्त प्राणीबीच एक आपसमा सहसम्बन्धको भाव विद्यमान रहन्छ भन्ने नै हो । हाम्रो पूर्वीय दर्शनको मान्यता छ:
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया...
कोरोना संक्रमण महामारीले गर्दा अहिलेको अवस्था ज्यादै दयनीय एवं कारुणिक छ । र, कुनै विश्लेषण नगरी बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा अहिले मानिस-
केही समय बाँदरले बच्चा च्यापेर उक्लने निकै कोशिश ग-यो । जस्ता तातेर ज्यादै पोल्न लागेपछि बाँदर बच्चा छोडेर बच्चामाथि टेकी उफ्रेर छानामाथि चढी आफ्नो जीवन जोगायो । यसबाट के पुष्टि भयो भने जुनसुकै प्राणी अन्तिम परेपछि आफ्नै जीवन जोगाउन तल्लीन हुँदोरहेछ । त्यसैले अहिले जनमानस अन्ततोगत्वा आफूलाई यो महामारीबाट कसरी सुरक्षित राख्ने ध्याउन्नमा नै लागि रहेको छ ।
मुख्यतः शारीरिक एवं मानसिक तबरले आफूलाई परिवर्तन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । यसका लागि विभिन्न पक्षलाई समेटी अबको मार्ग तय गर्नु पर्छ, जसमा-
आत्मविश्वास भनेको मानसिक अवस्था हो । विज्ञानको भाषामा आत्मविश्वासको कमीले इन्जायमको कार्यमा ६० प्रतिशतसम्म रुकावट आउँछ, जसले शारीरिक कष्ट पैदा गर्दछ । यस सँगसँगै रोगसँग लड्ने क्षमता (Immuneity power)को कमी गरिदिन्छ । त्यसैले ऊर्जाशील भएर जीउनका लागि आत्मविश्वास चाहिएको छ । आत्मविश्वासले हामीलाई आन्तरिक एवं वाह्य रुपमा सुरक्षित गर्दछ ।
पश्चिमा मनोविश्लेषक सिग्मण्ड फ्रेडले भने झैं एउटै कार्यलाई ३३ पटक दोहो-याएपछि त्यो बानी बन्दछ । हामीले हाम्रो जीवनचर्यामा केही परिवर्तन गरी त्यसलाई जीवनशैलीमा परिणत गर्न जरुरी छ ।
योगले तनाब र चिन्ताबाट मुक्त गर्दछ, तनाब कहिलै पनि शारीरिक हुँदैन, सदैव मानसिक हुन्छ । योगको काम मस्तिस्कलाई निर्विचार बनाउने हो । यसको अर्थ विचारविहीनता होइन कि विचार शून्य भएको अवस्था, जसको पराकाष्ठालाई बुद्धले निर्वाण भनेका छन् । खप्तड बाबाले भने जस्तै विचार कति गतिशिल छ, जसले आध्यात्मिक भाषामा भन्नुपर्दा सुक्ष्म शरीरको प्रतिनिधित्व गर्दछ । सुक्ष्म शरीरको गडबडीले स्थूल याने कि भौतिक शरीरमा बाधा पर्दछ । त्यसैले योगले विचार विहिनता होइन कि वैचारिक अवस्थाको शुन्यता तर्फ लैजान्छ, जसले गर्दा व्यक्तिलाई सोच एवं वैचारिरक कार्यले कुनै बाधा पु-याउँदैन । त्यसैले योगलाई जोड दिऊँ ।
ध्यानका अनेक फाइदा छन् । जस्तैः जागरण बृद्धि, चिन्ता नियन्त्रण, बिर्सने बानीको अन्त्य र कोर्टिसोल (Stress Hormone) व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ । जीवन बुझाईको स्तर बढाउँदछ, रिस कम गर्दछ, रस पैदा गर्दछ, रक्त सञ्चारमा ठूलो टेवा दिन्छ । तसर्थ ध्यानलाई जीवनशैलीको रुपमा ग्रहण गरौं ।
वैज्ञानिक सुसन विसले भने जस्तो नकारात्मक भावले कार्य गर्दा खाने बेलामा निस्कने इन्जाइमलाई पनि घटाउने कार्य गर्दछ, जसले शरीर अस्वस्थ हुन्छ । प्रामाणिक विषयबाट हेर्ने हो भने सकारात्मक चिन्तनले एउटा नयाँ आयामको सुरुवात गर्दछ- विचारमा मात्र होइन, स्वास्थ्य, क्षमता र कार्य दक्षतामा पनि । जसले जीवनको वास्तविक मूल्य के हो भन्ने मार्ग प्रशस्त गराइदिन्छ । जसको प्रभावबाट आदर्श जीवन यापन गर्नका निमित्त अत्यन्तै ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसैले नकारात्मक सोचको कमी गरी आजैबाट सकारात्मक बनौं ।
पूर्वीय जीवन संस्कार जस्तैः नमस्कार, स्वस्तिवाचन, (जसले ब्रम्हाण्डमा शक्ति ऊर्जित गर्दछ), शंख (वैज्ञानिक प्रमाणले पुष्टि गरेको छ, जसले २७ घनमीटरसम्म किटाणु निस्तेज पार्दछ), तुलसी, पिपल, स्वामी (जसले अक्सिजन उत्सर्जन गर्दछ)को वृक्षको महत्व प्रष्ट्याएको छ भने ‘हस्त पादे मुखे चैव पञ्चाद्रो भोजनं चरेत् न अन्यधृतं (वस्त्रं) धार्यम्’ अर्थात् भोजनअघि हात-पाउ धुनु र भोजन गर्दा दोश्रो व्यक्तिले छोएको, लगाएको कपडा नपहिरिनु भन्ने उक्तिको महत्ता स्थापित भएको छ ।
घिउजन्य चिल्लो पद्धार्थले हवन गर्दा सल्फर डाइअक्साइड, नाइटस अक्साइड जस्ता हानिकारक वायु घट्नु जसले गर्दा वायुमण्डलको दुर्गन्ध हटाउन मद्दत पुर्याउनुका साथै यी ग्यासले गर्दा ओजन तह पातलो हुने तर हवन शक्तिले यी ग्यासको वायु मण्डलमा प्रभाव घट्न गई ओजन तह बाक्लो भइ बैजनी रंगको किरण (Ultraviolet Ray) को आगमनमा न्यूनिकरण गर्दछ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य रहेको छ ।
हजारौं वर्षअघि हाम्रो शास्त्रले ‘ब्राम्ह मुहुर्त उत्थाय’ अर्थात ब्रम्ह मुहुर्तमा उठ्नु भनेको छ । अहिले पश्चिमाहरु पनि त्यही अर्थात् Early to bed early to rise, makesaman healthy wealthy and wise भन्न थालेका छन् । अक्सिजनको मात्रा बढी पाइने ब्रम्हमुहुर्तमा (तारा छँदैमा) पूर्व या उत्तरतर्फ फर्केर योगाभ्यास गर्दा सौर्य ऊर्जाले फोक्सोमा अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।
जुन वचन धेरैभन्दा धेरै जनमानसलाई हितकर हुन्छ भने त्यो बारम्बार दोहो-याउनु राम्रो हुन्छ किनकी त्यो पछि मन्त्र हुन जान्छ । त्यो मन्त्र आफ्नो शक्ति बन्न सक्छ । अहिले त्यही सकारात्मक सन्देश प्रवाहको जरुरी छ । त्यही वास्तविक जीवन चाहिएको छ । त्यसका लागि एउटा सानो दृष्टान्त:
गीताले भने जस्तो भूतमा पश्चाताप नगर्ने, वर्तमानमा रमाउने र भविष्य चिन्ता नगर्ने अनि जिउने, बस जिउने । कृष्णजस्तो जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हाँस्ने, वस्तुपरक भन्दा आत्मपरक बन्ने, कठिन परिस्थितिमा पनि हाँस्ने, नाच्ने अनि बाँच्ने । अस्तु !
#पूर्वीय दर्शन र जीवन पद्धति
जनैपूर्णिमा, रक्षाबन्धन तथा क्वाँटी खाने दिन
आज गाईजात्रा पर्व मनाइँदै, सावधानी अपनाउन आग्रह
वर्ग— वर्ण व्यवस्थाका आधार